Samsung Galaxy Buds Pro (Violet) ~ ICT.com.mm
Lenovo IdeaPad S540 (Ryzen 5) Light Silver-10K1,064,000
Lenovo IdeaPad S540 (Ryzen 7) Light Silver-10K1,208,400
Lenovo IdeaPad 5i (i3 11th Gen) Graphite Grey-10K849,680
Hoco M51 Proper Sound Universal Earphones with Mic (Red)-29K5,000
Hoco M51 Proper Sound Universal Earphones with Mic (White)-29K5,000
HomeNew ArrivalsSamsung Galaxy Buds Pro (Violet)
DxRacer Gaming Chair R188 Special Edition (Green)Back to New ArrivalsDxRacer Gaming Chair R95 (Pink)
Battery - Ear Buds Battery - 61mAh Charging Case Battery - 472mAh စွဲငြိဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံနားဆင်ခံစားရန်အတွက် ဆူညံသံပယ်ဖျက်မှု အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ AKG ရဲ့ အသံဖြင့် အားကောင်းတဲ့ ဦးတည်ရာ ၂ ဖက် စပီကာများမှ စတူဒီယိုအသံကို ယူဆောင်ခံစားပါ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်မှာ 360 အော်ဒီယို အသံဖြင့်ဝန်းရံလွှမ်းခြုံပြီး နားဆင်ခံစားကြည့်ပါ*... [Learn more]
Brand: SamsungSKU: N/ASee more: Earphones / Earbuds, Headphones & Wireless, New Arrivals, Products, Samsung, ShopFilter by: Earbuds,
Battery - Ear Buds Battery - 61mAh
Charging Case Battery - 472mAh
စွဲငြိဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံနားဆင်ခံစားရန်အတွက် ဆူညံသံပယ်ဖျက်မှု အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ
AKG ရဲ့ အသံဖြင့် အားကောင်းတဲ့ ဦးတည်ရာ ၂ ဖက် စပီကာများမှ စတူဒီယိုအသံကို ယူဆောင်ခံစားပါ
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်မှာ 360 အော်ဒီယို အသံဖြင့်ဝန်းရံလွှမ်းခြုံပြီး နားဆင်ခံစားကြည့်ပါ*
မြင့်မားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မိုက် ၃ ခုပါဝင်စနစ်နဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ခေါ်ဆိုမှု
Keep your earbuds in and letafriend tune in, too. Buds Together lets you connect two sets of Galaxy Buds Pro to your phone at the same time, so you can both listen to your BFF playlist with pro-grade sound quality.
This item: Samsung Galaxy Buds Pro (Violet) K259,000